दम्पतीका राेचक ६ किस्साः तपाई कस्ताेमा पर्नु हुन्छ मूल्यांकन गर्नुहोस् | Makalukhabar.com
दम्पतीका राेचक ६ किस्साः तपाई कस्ताेमा पर्नु हुन्छ मूल्यांकन गर्नुहोस्
मंसिर ११ । हरके दम्पतीमा केहि न केहि बिषेता हुन्छन् । कसैको दाम्पत्य सुखद हुन्छन्, कसैको नाटकिय । यस्ता अनेक प्रवृत्ति हुन्छन्, दम्पतीमा पनि । तपाई कुन कित्तामा पर्नुहुन्छ त रु मूल्यांकन गर्नुहोस् ।
यस किसिमको दम्पतीमा पती वा पत्नीमध्ये एक अभिभावक जस्तै व्यवहार गर्छन् ।
–पती चाहन्छन्, आफ्नी पत्नीले आमाले जस्तै मेरो हेरचाह गरोस् ।
–राम्रो खाना पकाइदियोस् ।
–आफ्नो जरुरतको सबैकुरा जुटाइदियोस् ।
–आमाले जस्तै वात्सल्य प्रदान गरोस् ।
–कतिपय अवस्थमा पत्नीले पनि यस्तै अपेक्षा राख्छिन् ।
–उनीहरु चाहन्छन्, कि आफ्नो पतिले पिताले जस्तै स्नेहपूर्ण व्यवहार गरोस् ।
–आफ्नो रक्षा र केयर गरोस् ।
समस्या– यस किसिमको प्रवृत्तिले दाम्पत्य जीवनमा खासै असर गर्दैन । तर, यदि अपेक्षा बढ्दै गयो भने सम्बन्धमा खटपट ल्याउन सक्छ ।
यस्तो दम्पती कहिले एकअर्काको केयर गर्छन्, कहिले उपेक्षा पनि । अर्थात पेन्डुलम जस्तै कहिले यता त कहिले उता हुन्छ । यिनीहरुको मुड बद्लिइरहन्छ ।
–यस किसिमको दम्पतीमा एक पार्टनरले अर्काको धेरै ख्याल राख्छन् । यद्यपी पार्टनरले आफुप्रति गरेको यस्तो व्यवहार अर्कोले महसुष नै गर्दैनन् ।
– त्यस्तै दोस्रो पार्टनरले केयर गर्न थालेपछि अर्कोले वेवास्ता गरिदिन्छ ।
समस्या– यस्तो प्रवृत्ति भएको दम्पतीमा धेरै हुन्छन् । खासगरी भिन्न भिन्नै पृष्टभूमी, संस्कारमा हुर्किएका उनीहरु आपसमा राम्ररी मिलेर बस्न सक्दैनन् ।
यसखाले दम्पतीमा एकजना पार्टनरको आत्माविश्वस यति कम हुन्छ कि, अर्कोप्रति पूर्ण निर्भर हुनुपर्छ ।
–यिनीहरुले अर्को पार्टनरलाई आफ्नो आदर्श मान्छन् ।
–आफु स्वंमलाई भन्दा पार्टनरलाई बढी विश्वास गर्छन् ।
समस्याः यिनीहरु आफ्नै बारेमा नकारात्मक धारणा पालेका हुन्छन् । त्यसैले दोस्रो पार्टनर यिनीमाथि हावी हुन्छन् । उसले आफ्नो बढाई(चढाई गर्छन् तर, उनी पनि पूर्ण क्षमतावान हुदैनन् । आफ्नो पार्टनर आफुप्रति निर्भर रहेको र कमजोर रहेको कुराले उनमा जहिले पनि असुरक्षा महसुष हुन्छ ।
यिनीहरु सानोतिनो कुरामा पनि ठाकठुक परिरहन्छ । तर, अर्काको अगाडि निकै मिलेको अभिनय गर्छन् ।
–यस्तोमा दुबै दम्पतीमा परिपक्कताको कमी हुन्छ ।
– यिनीहरुले पार्टनरको भावनाको कदर गर्दैनन् ।
–यिनीहरु त्यसैपनि तर्क बितर्क गरिरहेका हुन्छन् ।
समस्या–कहिले कहिं यस्ता दम्पती सार्बजनिक स्थानमै झगडा गर्न सुरु गर्छन् । एकअर्कामा बिबाद नगरी उनीहरु बस्नै सक्दैनन् । आफ्नो दाम्पत्य सुखमय नहुने भएकाले उनीहरु जहिले पनि असुरक्षित महसुष गर्छन् ।
यो स्थिर र प्रतिष्ठित दम्पती हो । यिनीहरुले एकअर्कालाई सम्मान मात्र गर्दैैनन्, स्पेश र प्राइभेसी पनि दिन्छन् ।
–यस किसिमको दम्पतीले पार्टनरको खुबी र कमजोरी दुबै बुझेका हुन्छन् ।
–सम्बन्धमा आएको उतारचढावलाई पनि उनीहरुले सहज रुपमा हल गर्न सक्छन् ।
–यिनीहरुले सार्बजनिक स्थानमा आफ्नो समस्या कहिल्यै खुलाउँदैनन् ।
–उनीहरु एकअर्कामा हावी हुने चेष्टा गर्दैनन् ।
समस्या–कहिले कहिं आवश्यक्ताभन्दा बढी परिपक्कताले उनीहरुको दाम्पत्यलाई निरास बनाउन सक्छ । उनीहरुमा बिवाहित जोडीमा हुने मीठो नोंक(झोंक कमै देखिन्छ ।
यस्तो दम्पती एकअर्काको निकै ख्याल राख्छन् । साथै अरुको सामुन्ने आदर्श जोडीको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न सक्छन् ।
–यिनीहरु आपसमा यति प्रेम गर्छन् कि, उनीहरुको यो घनिष्ठता इष्र्यालाग्दो हुन्छ ।
–यिनीहरु त्यस्तै रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्छन्, जो अरुको निम्ती अनुकरणिय हुन्छ ।
–यिनीहरु कुनै समारोह, भेटघाटमा एकअर्कामा मिल्दो पहिरन लगाएर उपस्थित हुन्छन् ।
समस्या –यस्तो दम्पतीको प्रवृत्ति के पनि हुनसक्छ भने, एकजना बोस बस्ने र अर्को सहसनसिल । वाहिरबाट राम्रो देखिएपनि उनीहरुमध्ये एक पार्टनर दबिएको हुनसक्छन् । एजेन्सी
केही जटिल राेगकाे लक्षण नङबाट यसरी थाहा हुन्छ
जाडो मौसममा शरीरलाई स्वस्थ राख्न कस्तो खाना खाने ?
मंसिर २५, काठमाडौ । जाडो मौसममा शरीरलाई स्वस्थ राख्न खानापानमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । चिसो मौसममा व्यायाम र खानामा तालमेल मिलाउन सकियो भने स्वस्थ र शरीरलाई आराम पुग्छ । खानपान र व्यायाममा ख्याल गरिएन भने चिसोमा शरीरमा पानी र क्यालोरी कम हुन्छ । जसले गर्दा विभिन्न रोगको संक्रमण शुरु हुन थाल्छ । च... जारी राख्नुहोस...
तपाईलाई कसैले साँचो माया गरेको हो कि झुटो माया गरेको यसरी पत्ता लगाउनुस्
मंसिर २४ । अहिलेको सूचना र प्रविधीको युगमा यो लभ भन्ने विज्ञान निकै फस्टाएको छ । किनभने अहिले बाबा आमा र आफन्तहरु गर्ने माया त छर्दै छ । तर यहा एक प्रेमी र प्रेमिकाले गर्ने माया कुरा गर्न लागिरहका छौ ।जहाँ भनिन्छ , मायामा , जातभात ,सानोठुलो हेरिदैन् । यदि परि हालेमा एकले अर्कालाई ज्यान दिन समेत पनि... जारी राख्नुहोस...
अचम्मकाे समुदाय जहाँ गोरो बच्चा जन्मिए मृत्युदण्ड
मंसिर २४ । विश्वका विभिन्न जनजाति समुदायहरुका अनौठा विशेषता र मूल्य मान्यता छन् । यस्तै भारतको अन्डमान टापुका जनजातिहरु गोरो बच्चा जन्मिएमा मृत्युदण्ड दिने गर्छन् । भारतको निषेधित टापु अण्डमानमा बस्ने एउटा जनजाति समुदायमा जन्मिएको बच्चा जति कालो भयो उति नै राम्रो मानिन्छ । र, गोरो बच्चा जन्मिएमा मृत... जारी राख्नुहोस...
पेटको दुखाईले हैरान हनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी सरल घरेलु उपाय
मंसिर २४, काठमाडौं । पेट दुख्ने समस्या हामी सबैको साझा समस्या नै हो । यसको समस्या धेरैमा पाइन्छ । पेट दुखेमा बजारमा धेरै औषधीहरु पाइन्छन । तर, बजारमा पाइने औषधी भन्दा घरेलु उपाय अपनाएमा शरीरलाई धेरै फाइदा हुन्छ । कतिपय औषधीहरु व्यथा घटाउने भन्दा बढाउने खालको हुन्छन् । त्यसैले सकेसंम घरेलु औषधी कै प्... जारी राख्नुहोस...
विवाहमा साढे दुई किलो प्याज उपहार दिएपछी...
मंसिर २३, भारत । भारतको तिमलनाडुको कुड्डालोरमा एक जोडीलाई विवाहको उपहारस्वरुप साढे दुई किलो प्याज दिइएको छ । नवविवाहित शाहुल र सबरिनाले केही समयका लागि आफू अचम्मित भएको बताए । रिसेप्सनको क्रममा उपहारमा दिइएको प्याजको पनि अत्यधिक चर्चा भयो । आजकाल उक्त राज्यमा प्याजको मूल्य दुई सय भारु प्रतिकिलो छ ।श... जारी राख्नुहोस...
मंसिर २२, काठमाडौं । नक्सालस्थित होटेल मेरिएटको पहिलो तलामा छ, एडमामे रेष्टुरा । आरामदायी, सम्पन्न तथा आकर्षक आधुनिक एशियन शैलीको एडमामेले नयाँ चाइनिज मेन्यू सुरु गरेको छ ।‘ओक एण्ड बउल’ नामक उक्त मेन्यूमा हरेक शनिबार लञ्च आवरमा मौलिक चिनियाँ व्यञ्जन उपलव्ध हुन्छ । उक्त रेस्टुरेन्टमा जापानी, चिनियाँ... जारी राख्नुहोस...
भक्कावाली दिदीको व्यथाः सोचेजस्तो हुन्न रै’छ
मंसिर २२, काठमाडौं । विराटनगरको सनी हाट चौकस्थित भुमी सुधार कार्यालय नजिकैको बाटोमा धुलो उडिरहेको थियो । मानिसहरु नाक मुख छोपेर हिँडिरहेका थिए । त्यही बाटोको एक छेउमा धिपधिप आगो बलिरहेको थियो । नजिकै गएँ । एक चुलो, त्योमाथि भक्का पाकिरहेको थियो । त्यही छेउमा एक दिदी थिइन् । ‘यस्तो धुलोमा गाह्रो हुँद... जारी राख्नुहोस...
एलइडी लाइटको जस्तो प्रकाश आउँने अचम्मको कुवा
मंसिर २२ । पोर्चुगलमा एउटा यस्तो कुवा छ जहाँबाट प्रकाश निस्किन्छ । जुन प्रकाश एलइडी लाइटको जस्तो हुन्छ ।यद्यपी यो प्रकाश कहाँबाट र कसरी आइरहेको छ भन्ने कुरा अझैसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । यो कुवाको बनावट पनि निक्कै आकार्षक देखिन्छ ।यो कुवा हजारौं वर्ष पुरानो र मानिन्छ । मानिसहरु यो कुवामा सिक्क... जारी राख्नुहोस...
मज्जाले हाँस्नुस् किनकी हाँस्दा हुन्छ यती धेरै फाईदा
मंसिर २०, एजेन्सी । आउनुहोस् हामीले हाँस्नुका केहि फाईदाहरुबारे जानकारी दिन्छौं ।– हाँस्दा हाम्रो शरीरमा एक किसिमको हर्मोन उत्पन्न हुन्छ , जसले तनाव कम गर्छ । त्यसैले, दिल खोलेर हाँसौ । कठिन परिस्थितिमा पनि हाँस्न सक्नु नै स्वस्थ रहने सरल उपाय हो ।– हाँस्दा शरीरका अंगहरू सक्रिय हुने गर्छन् । जसकारण... जारी राख्नुहोस...